२० कारण किन शारीरिक घनिष्ठता महत्त्वपूर्ण छ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सम्बन्ध
२० कारण किन शारीरिक घनिष्ठता महत्त्वपूर्ण छ
घर सम्बन्ध प्रेम र रोमान्स प्रेम र रोमान्स oi-A मिश्रित तंत्रिका द्वारा एक मिश्रित तंत्रिका | अद्यावधिक गरिएको: आइतबार, अगस्त 5, २०१,, १:4::4१ [IST] दैनिक Bene ex का लाभहरू तपाईं दिनहुँ सेक्स गर्ने फाइदाहरू सुनेर चकित हुनुहुनेछ। बोल्डस्की
के तपाइँ विवाहपूर्व आत्मीयता बनाउन को लागी एक गलत कदम हो? त्यहाँ केहि छन् जो विश्वास गर्छन् कि यो छ! यद्यपि, अधिकांश आधुनिक जोडीहरू साथीलाई चिन्ने एउटा तरिका घनिष्ठ हुनु हो भनेर विश्वास गर्छन्।
घनिष्ठ हुनुको अवधारणाको अर्थ संभोग गर्नु होइन। यस उद्देश्यमा, शारीरिक आत्मीयताको मतलब तपाईंको साथीको प्रेम र न्यानोपन, एकल स्पर्श, अ a्गालो वा चुम्बन द्वारा बढेको हो।
जब सम्बन्धमा कुनै आत्मीयताको कुनै रूप हुँदैन, यो चुरुन र पतन हुन्छ।
शारीरिक आत्मीयता किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कारण यो हो कि यसले तपाइँ दुईलाई शरीर र आत्मामा एकसाथ तान्दछ। यसले तपाईंको जडान बाध्न मद्दत गर्दछ र यसले दुबै साझेदारहरूलाई एक अर्काको साथ सुरक्षित महसुस गर्दछ। शारीरिक आत्मीयता महत्त्वपूर्ण छ किन अर्को कारण यो तपाईं स्वस्थ राख्छ कि, तरिका मा तपाईं कल्पना पनि छैन।
यहाँ केहि वास्तविक कारणहरु छन् किन शारीरिक सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण छ एक सम्बन्धमा:
यसले तपाईंलाई जडान गर्न मद्दत गर्दछ
यसले तपाईंलाई तपाईंको पार्टनरसँग सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्दछ जहाँ तपाईंले कल्पना पनि गर्नुहुन्न।
तपाईंलाई न्यानो महसुस हुन्छ
जब तपाईं आफ्नो साथीसँग घनिष्ठ हुनुहुनेछ, तपाईंले प्रेमको त्यो गर्व महसुस गर्नुहुन्छ, केवल साधारण अ h्गालेर।
तपाईको पार्टनरसँग घनिष्ट सम्बन्ध राखेर तपाई यस ठूलो फराकिलो विश्वमा सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। जब उसले तपाईको वरिपरि आफ्नो काखमा लपेट्छ, भावना अवर्णनीय छ।
तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण महसुस गराउँछ
जब तपाइँ तपाइँको प्रेमीको काखमा समात्नुहुन्छ, यसले कुनै प्रकारले तपाइँलाई तपाइँको साथीको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस गराउँदछ।
पानी तपाईंको सम्बन्ध
शारीरिक आत्मीयता किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने धेरै कारणहरू मध्ये एउटा हो किनकि यसले प्रेमको बन्धनलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
रातो वाइन निष्पक्ष छाला को लागी लाभ
तपाईंको हार्मोन्स रशिing हुन्छ
आफ्नो गालमा दगुर्दै वा तपाईंको हात समाउँदै प्रियजनको औंलाहरूको स्पर्शले तपाईंलाई उत्साह दिन सक्छ। यसले सम्पूर्ण शरीर कंपक्राता बनाउँछ!
एकता को भावना
तपाईंको पार्टनरसँग घनिष्ठ हुनु, तपाईं आफ्नो शरीर र आत्मामा महसुस गर्नुहुन्छ।
कसले आफ्नो साथीको प्रेम र गर्मी महसुस गर्न चाहँदैन? एक अर्कासँग शारीरिक बनेर मात्र कसैले यो महसुस गर्न सक्दछ।
यसले तपाईंलाई एक प्रकारको आश्वासन दिन्छ कि तपाईं उहाँसँग वा उहाँसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ तपाईंले सम्बन्धमा घनिष्ठता पाएपछि।
एक चुम्बन को शक्ति
चुम्बन को शक्ति पक्कै जादुई छ! प्रेमीको चुम्बनले तपाईंको जीवन कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने वर्णन गर्न त्यहाँ कुनै शब्दहरू छैनन्।
त्यो तनाव हटाउँछ
यदि तपाईं तनावग्रस्त हुनुहुन्छ भने, घनिष्ट हुनुले तपाईंलाई त्यो तनावबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
कुनै एक्लो महसुस छैन
जब तपाईं सम्बन्धमा शारीरिक प्राप्त गर्नुहुन्छ, एक्लो महसुस गर्ने कुनै भावना हुँदैन किनकि तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको साथीको काँधमा झुकाव छ।
एक सम्बन्ध मा घनिष्ठ हुनु एक स्पर्श संग तपाईंको साथीलाई तपाईंको हेरचाह र चासो देखाउनको एक तरिका हो।
यो केही कम समस्याहरु
जब तपाइँ तपाइँको पार्टनरको काखमा समात्नुहुन्छ वा चुम्बन गर्दै हुनुहुन्छ, के यसले तपाइँका सबै भारहरू हटाउँदैन? यसले तपाईंलाई समस्याहरूको अस्तित्व बिर्सिन फ्लोट बनाउँछ।
माया गर्न त्यो मसला जोड्दछ
शारीरिक आत्मीयता किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मध्ये एउटा कारण यो तपाईंको सम्बन्धमा मसला थप गर्दछ।
तपाईंलाई चाहानुहुन्छ बनाउँदछ
जब तपाईं सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, एक समय आउँछ जब तपाईं आफ्नो पार्टनरले चाहेको महसुस गर्न चाहानुहुन्छ। यो तब हुन्छ जब तपाई वास्तवमा सोच्नुहुन्छ कि शारीरिक आत्मीयताले महत्व राख्दछ।
रिमाइन्डर त्यो तपाईंको एक हो
यो एक नरम रिमाइन्डर हो कि तपाईं आफ्नो पार्टनरको लागि एक हो। यो त्यो जादुई चुम्बन वा अug्कको माध्यमबाट हो कि तपाईं यो व्यक्ति द्वारा केवल चुम्बन र समाई हुन चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ।
तपाईंको हृदयलाई हल्का बनाउँछ
सम्बन्धमा तपाईंको पार्टनरसँगको आत्मीयताले तपाईंको छातीमा पिट्ने उत्तेजनाको भारी पाउण्डन घटाउनुहुन्छ भने तपाईंको मुटुमा यस्तो हल्का महसुस हुन्छ।
त्यो विशेष भावनामा ल्याउँछ
शारीरिक निकटता महत्त्वपूर्ण छ किन धेरै कारणहरू मध्ये एक यो सम्बन्ध मा कि विशेष भावना ल्याउँछ किनभने, विशेष गरी दीर्घकालीन सम्बन्धहरु मा।
प्रेम देखाउने तरिका
अरू सबै बाहेक, तपाईंको पार्टनरसँग घनिष्ट हुनु भनेको केवल तपाईं उसलाई / उनको प्रेम तपाईको हृदय भित्र भएको देखाउन चाहानुहुन्छ।
यी सबै प्रमाणित गर्दछ किन शारीरिक घनिष्ठता आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले आफ्नो पार्टनरसँग जोड्नुहुने तरिकाले तपाईंलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा मद्दत गर्दछ। शारीरिक आत्मीयता संचारको रूपमा सँधै एक तरीका हो। यसले विश्वास र आदर ल्याउनमा मद्दत गर्दछ।
यदि तपाइँ लेख पढ्न मनपराउँनुहुन्छ भने, एक शेयर दिनुहोस्।
डन्ड्रफ र हेयरफलका लागि एलोवेरा
वजन निम्त्याउन निम्बू एन मह
तरकारीमा उपस्थित एसिडहरूको नाम
पाम पढ्ने विवाह रेखा बाँया वा दायाँ हात
कसरी अनुहार र हातबाट सूर्य ट्यान हटाउने
तरबूज तौल घटाउनका लागि राम्रो छ
बिहान सबेरै खाली पेट के खानुपर्दछ